Maxay kalluunka ka fikiraan? mashruuca sawirka | Abuurista khadka tooska ah
Maxay kalluunka ka fikiraan? Waa su'aal gaar ah oo in yar oo inaga mid ahi isweydiiyeen, laakiin… kalluunka muxuu runtii ka fikiri doonaa? Miyay yeelan doonaan fikirradeena isku mid ah? su'aalahaas waxaa kajawaabay fanaanka / naqshadeeye Amaya Uscola
Shaki la’aan waa mashruuc xiiso badan oo ka dhashay waxa aan ugu yeerno fannaaniinta "mashaariic shaqsiyeed" fikradeeda gaarka ah fanaanadu waxay kudhamaatay abuurista a mashruuca sawir cajiib ah. Haddii aad jeceshahay sawirka iyo buugaagta beddelka ah, ma tabi kartid mashruucan.
Fanaaniinta oo dhami waxay wadaagaan hal shay, waxaan jecel nahay in aan abuurno mashruucyo shaqsiyadeed nooc kasta leh iyadoo marmarsiinyo laga dhigayo buuxinta faylalka markii runta la abuuro maxaa yeelay ma joojin karno inaan la soo baxno dhammaan fikradahayada, oo kanuna wuxuu ahaa bilowgii mashruuca muujinta ah Xusuusta Pez by Amaya Uscola. Maalin la mid ah kuwa kale bilaabay inuu soo jiito kalluunka iyo ka fikirida inay fekereen iyo inkale, sida ay sheegtay kalluunku wuxuu leeyahay fikrado iyo dabeecado kala duwanIyada oo ku saleysan fekerkaan, waxay bilowday inay ku darto cunnooyin fudud kalluunkeeda fikrado ay mala awaashay.
Maalin maalmaha ka mid ah ayaa timid farriin dhiirrigalinaysa caqabad ku ah Instagram sawir qaadayaasha taas oo ay tahay maalinba wax sawir, Amaya waxay go'aansatay inay maalin walba kalluun ku sawirto buugeeda. Maalin walba Waxaan ku sawiray qalin fudud tijaabo kalluun ka duwan, uma baahnin in la sameeyo nooc ka mid ah sawir hore maxaa yeelay wuxuu si fudud u sawiray wax kasta oo maskaxda ku soo dhaca. Kalluun kasta agtiisa wuxuu ku daray sharrax kooban oo ku saabsan noocyada iyo fikir nooc kasta oo kalluun ah.
Nidaamkiisa shaqo wuxuu ka bilaabmay London halka Waxaan soo iibsadaa buug yar oo ku saabsan 12 of 16 oo leh go'yaal midab leh, bilaashkan wuxuu bilaabay inuu sawiro wax walba oo maalin walba ku soo dhaca. Waxaa xiiso leh in la ogaado in sawirka Ma isticmaalo kombuyuutarka wakhti kasta Si aad u taabato sawiradaada, dhammaantood waxaa lagu sameeyaa gacan.
Maalin kulan waxay arkeen buugiisa kalluunka waxayna go’aansadeen iyagoo aan shaki ku jirin in la daabacayo, Waxay aad ula dhacsanaayeen kalluunka Amaya oo ay go'aansadeen soo saari buugga xusuus qorka si isku mid ah adoo adeegsanaya qaab isku mid ah, midabbada isku midka ah ee warqadda iyo sawiradii asalka ahaa oo aan kumbuyuutar lagu hagaajin
Hadda buugga waa lagu kalluumeysan karaa (lagu iibsan karaa) khadka tooska ah ka soo qaaday bogagga kala duwan ee fannaanka. Haddii aad jeceshahay inaad gacanta ku haysato warqad kalluun gacmeed, waa inaad tan soo gashaa oo keliya web
1 Dallacsiin wanaagsan
2 Adeegso shabakadaha si aad kor ugu qaaddo shaqadeena
para kor u qaadista mashruuca tifaftirka fiidiyow ayaa laga sameeyay halka ay umuuqatay buuggu wuxuu yimid xeebta badda, waa arrin xiiso badan muuji muhiimada fiidiyowgaan maadaama ay si buuxda uga dhigan tahay nuxurka mashruuca. Shaki la'aan, abuuritaanka noocan ah hindisaha wuxuu matalaa a qiimaha lagu daray labadaba kor u qaadida badeecada iyo mashruuc shaqsiyeed laftiisa, maadaama ay horumar ka tahay fikradii asalka ahayd.
Waxa kale oo aad arki kartaa a fiidiyow yar oo ku saabsan bandhig kaasoo ka dhacay magaalada Barcelona halkaasoo lagu soo bandhigay sawirradii asalka ahaa iyo buugga.
Adeegso shabakadaha si aad kor ugu qaaddo shaqadeena
Qabashada bandhig ayaa xiiso u leh dhamaan fanaaniintaas raba inay horumariyaan oo ay gaaraan dhagaystayaal aad u tiro badan, fikrad fiican markaad samaynayso a gaadhista dadweynaha Waxay isku dayeysaa inay ka muuqato qaar ka mid ah warfaafinta, ha ahaato mid daabacan ama mid dijitaal ah. Waa inaanan ilaawin awoodda warbaahinta bulshada iyo awoodda ay u leeyihiin inay la xiriiraan dad badan, waa mid aad loogu taliyay sawirro qaado iyo fiidiyowyo u gaar ah inaan si toos ah ugu xayaysiino dhammaan bandhigyada aan qabanno.
Soo bandhig shaqadeena
Isku day u bax warbaahinta bulshada (daabacan ama dijitaal ah)
Duub Vidiyo inta lagu guda jiro bandhigga si loo helo waraaqo shaqsiyeed oo toos ah
Waa wax xiiso leh in la arko sida figrad fudud ayaa noqota wax aad u weyn meel kasta tagi kara, awooda fanaanku xad ma leh marka fikrad maskaxdiisa gasho. Muxuu ahaa buug xusuus qor ah oo leh sawirro ayaa noqday a shakhsi ahaaneed iyo tifaftir gaar ah. Fanaaniinta iyo hal abuureyaasha guud ahaan, marwalba xasuusnow keydi buugaggaaga iyo fikradahaaga sababta oo ah waxa laga yaabaa inay mar uun u soo baxaan dabaasha sida buuggan kalluunka.
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato fanaanadan waxaad arki kartaa qaar ka mid ah shabakadaha bulshada:
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Maxay kalluunka ka fikiraan? mashruuca sawirka